राष्ट्रिय खेलाडी अनिता महर्जन : जसले टेनिस खेल्न समाजसँग विद्रोह गरिन - Kantipath.com
नेपालको टेबल टेनिस क्षेत्रमा अनिता महर्जन एक सुप्रसिद्ध नाम हो । उनलाई खेल क्षेत्रमा एनिलिया एनि भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। पितृसत्तामक सोच भएको समाजले खडा गरेको मानकको विरुद्ध उभिएर समाजलाई गतिलो उदाहरण दिन उनी सक्षम छिन । करिब १५ वर्ष देखि टेबल टेनिसमा सक्रिय महर्जनको नेपाली टेबल टेनिस खेल को विकास र उन्ननयनमा ठुलो योगदान छ।
करिब सात बर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको विभागीय टोलीमा आबद्ध महर्जनले ३७ औँ राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता, पहिलो राष्ट्रिय ओपन टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ७ औँ र ८ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लगायतका प्रतियोगिताहरुमा रजत तथा काश्य पदक आफ्नो नाममा पारिसकेकी छिन्।
सन् २०१९ देखि अल नेपाल टेबल टेनिस क्लबको कोषाध्यक्षको रूपमा अनुबन्धित उनले १३ औँ सागमा लियाजन अफिसरको भूमिका समेत निर्वाह गरेकी थिइन्। कोभिड १९ महामारीमा पुर्याएको योगदानका लागि नेसनल हिरो अवार्ड नेपाल २०१९ मा मनोनित हुन सफल भईन् । तामाङ को-अपरेसन सोसाइटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट उनले ‘हामी नेपाली ग्लोबल कोभिड १९ हिरो अवार्ड २०२० पनि ग्रहण गरेकी छन् ।
महर्जनले नयाँ एरोबिक टेबल टेनिस क्लब, ‘अनिज क्लब’को स्थापना गरेकी छिन्। उनले गत एप्रिल ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस दिवसको अवसर पारी आफ्ना आमाबुबाको हातबाट आफ्नो नयाँ क्लबको उद्घाटन गरेकी हुन्। सामाखुसीको सरकारीधारा स्थित आफ्नै घरमा रहेको अनिज क्लबमा जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि टेबल टेनिसको प्रशिक्षण गर्न पाउने छन्। एकल आर्थिक खर्चमा खोलिएको उक्त क्लबको मुख्य उदेश्य नेपालका नयाँ पुस्तालाई टेबल टेनिस सिकाउनु रहेको अनिता बताउँछिन्।
विश्व एरोबिक टेबल टेनिसका संस्थापक तथा सीईओ स्टिभ रोईले अनितासँग पार्टनरशिप गर्न चाहेपछि रोईसँगको सम्झौता पछि एनीज पिङपङ क्लबमा एरोबिक टेबल टेनिसको शुरुवात पनि भयो । सन् २०११ मा सुरुवात भएको एरोबिक टेबल टेनिस अनिता मार्फत् नेपालमा भित्रियो । टेबल टेनिसमा चाहिने ड्रिल, फुटवर्क ड्रिल, स्याडोविङ सबैलाई संगीतको बिटमा ढालेर एरोबिक टेबल टेनिस सिकाइन्छ।
महिला सशक्तीकरणको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस संघ (आईटीटीएफ) ले यस वर्षको वल्र्ड टेबल टेनिस डे मनाउने क्रममा एनीज पिङपङ क्लबलाई आफ्नो औपचारिक सञ्चार माध्यमद्वारा संसारभर चिनाएको थियो।
एनिले एनीज पिङ्पङ क्लब मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने सपना बोकेकि छिन्। नेपाली टेबल टेनिसलाई नयाँ उचाई दिने एनीको समर्पण तारिफयोग्य रहेको छ। एनीज पिङपङ क्लबको मुख्य उद्धेश्य टेबल टेनिस सिक्न उत्सुक बालबालिका तथा युवाहरुलाई उच्च स्तरको प्रशिक्षण प्रदान गर्नु हो ।
खेलकुद पुरुषको मात्र नभएर महिलाको पनि हो । अवसर पाए भने महिलाले पुरुषको भन्दा राम्रो गर्न सक्ने अनिता बताउछिन । कलिलो उमेरमै टेबल टेनिस खेल्न थालेपछि महर्जनलाई आफ्नो संस्कृतिमा किशोरावस्थादेखि नै विद्रोही स्वभावको ठानिन्थ्यो। महिला पुरुष भनेर गरिएको भेदमा उनी विद्रोह गर्थिन, पुरुषले गर्नसक्ने हरेक काम आफु गर्न सक्छु भन्ने आत्माविश्वास उनिमा थियो ।
आफ्नो खेल जीवनको सुरुवाती चरण स्मरण गर्दै उनी भन्छिन, ‘हामी त्यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्छौ जहाँ खेल केटीहरूको लागि हैन भन्ने सोचिन्छ। अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा महिलाहरूलाई भिन्न तरीकाले व्यवहार गर्ने र उनीहरुलाई घरको चार पर्खालहरूमा सीमित राख्न सकिने अपेक्षा गरिन्छ। हामी हाम्रो आफ्नो गन्तब्य छनौट गर्न सक्दैनौं र साधारणतया ठूला निर्णयहरू गर्दा खारेज हुन्छन्, हाम्रो भाग्य लेखिदिनेवाला अर्को कोहि हुन्छ।’
टेबल टेनिसको प्रशिक्षणभर उनलाई अबमुल्यन गर्दै लगातार पुरुष खेलाडीहरुको पछि राखिन्थ्यो। यो क्रम तबमात्र भंग भयो जब उनले उत्कृष्ट भनिएका पुरुष खेलाडीलाई हराएर पदक जितिन । म महिला भएका कारण उनीहरुलाई हराउन सक्दिन भन्ने दिग्भ्रम थियो ।
उनले टेनिस क्लब खोल्ने योजना सुनाउँदा पनि उनलाई धेरैले हाँसोमा उडाउने गरेका थिए । तर आफुले उनीहरुलाई सफलताले जवाफ फर्काएको उनको भनाई छ । उनी सबैलाई निडर र बलियो बन्न सुझाब दिन्छिन। उनले भनिन, ‘तपाईको सपनाहरु अनुसरण गर्नुहोस् र समाजले के भन्छ त्यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। कडा परिश्रम गर्नुहोस्, प्रयास गरिरहनुहोस्, र एक दिन तपाईंको सपना वास्तविकतामा परिणत हुनेछ।पुरुषले गर्न सक्ने महिलाले नसक्ने भन्ने दुनियाँमा कुनै काम छैन।’
Previous Previous post: घाँसदेखि राँगोसम्म अनुदानमा
Next Next post: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई उपचार गर्न भारत लगिंदै
नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल !
राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगितामा ओलम्पियन गौरिका सिंहलाइ पाँच कीर्तिमानसहित ६ स्वर्ण
बक्सर म्याक्सीमको निधन
को हुन् हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने खेलाडी ?
पृतनापति ट्रफी २०७७ को उपाधी सन्तरामलाई